Ungasidibanisa njani isiCwangciso sakho soMxholo kunye neMikhankaso yeendaba zeNtlalo | Martech Zone
Lwesine, Matshi 28, 2013 NgoMvulo, Juni 10, 2013 I-Jayson DeMers
Ubudala beSicwangciso soMxholo
Yiminyaka “qhinga lomxholo"Kunye" nokuthengisa umxholo. " Naphi na apho ujika khona, rhoqo nangakumbi, yinto oza kuyiva. Ngokwenyani, umxholo ibiyinxalenye ephambili yentengiso ye-Intanethi ukusukela ngeentsuku zokuqala zokwenziwa kweinjini yokukhangela. Ngokuhlaziywa kwe-Google algorithm yakutshanje, nangona kunjalo IPanda kunye nePenguin, Isicwangciso esiqinileyo somxholo siye sabaluleke ngakumbi.
Umxholo ophawulweyo usebenza ngokumangalisayo kwiinkampani ezininzi, kwaye asithethi nje ngomxholo wewebhusayithi apha. Sijonge uyilo olucwangciswe kakuhle, olupakishwe ngobuchule, kunye nolwazelelo-lwasentlalweni-umxholo wokulunga owenza izinto zenziwe ngeemveliso ezinkulu kunye noosomashishini abancinci ngokufanayo.
Isicwangciso somxholo siyaphila kwaye sikhaba iiwebhusayithi. Ujoliso lwamanqaku amaninzi ebhlog ye-SEO nawo, kodwa abantu abaninzi endibabonayo-abantu ababandakanyekayo kwimidiya yoluntu-abacwangcisi isicwangciso-qhinga somxholo weendlela zabo zentlalo. Ngaphandle kwento yokuba abantu bahlala bejonga imithombo yeendaba njengezinto ezingenanto, ezipakishwe (ezibangelwa yinkolelo yokuba imithombo yeendaba zentlalo "yeyokwabelana" ngomxholo ofunyenwe kwenye indawo), inokwenza imimangaliso kuwo nawuphi na umkhankaso / kwimizamo yeendaba zosasazo.
Isicwangciso soMxholo seMidiya yoLuntu? Ingaba uyadlala?
Ukuzibandakanya kwisicwangciso esifanelekileyo somxholo wewebhusayithi kunzima ngokwaneleyo; Emva kwayo yonke loo nto, kuthatha izixhobo ezininzi ukwenza umxholo wokuhlelwa kwebhlog elula. Kutheni le nto umntu efuna ukuchitha ixesha (kwaye mhlawumbi nemali) ngesiqulatho sokuya kumajelo asekuhlaleni? Ngaba asizokwabelana nje ngamakhonkco kunye nemifanekiso?
Inxalenye enkulu yemikhankaso yakho yemidiya yoluntu inokwenene inokwabelana nomxholo onomdla kwaye ofanelekileyo, ukuthumela ii-statuses okanye ii-tweets ezinceda abasebenzisi, ukubandakanya abafundi / abalandeli, njl. Njl. imicimbi. Kukho isixa esifanelekileyo seqhinga elibandakanyekayo; kwaye ngaphandle kwesicwangciso nje, kukho "iqhinga lokuqulathiweyo" nkqu nakumajelo asekuhlaleni. Izinto ezintathu zibaluleke kakhulu kwimikhankaso yakho yemidiya yoluntu:
Imixholo yemidiya yoluntu ayenzelwanga nje ukuqokelela iimpawu zentlalo yeGoogle, nangona oko kubaluleke kakhulu. Ayigcini nje ukuqhuba ngokucofa nje, nokuba. Uninzi lwazo zonke, ungasebenzisi nje isicwangciso somxholo kuphela ukuba ube "nephathekayo" kwiphepha leendaba loluntu.
Imidiya yoluntu kufuneka iqhube uthethathethwano. Oku kwandisa ulwazi lwebrand, ukuthandwa, kunye nentembelo. Konke oku, akumangalisi, kuxhomekeke kwisicwangciso sakho somxholo wemidiya yoluntu.
Sisiphi isiCwangciso esiQinisekileyo seMithombo yeendaba kuLuntu?
Inkcazo yokulunga ingahluka ngokubanzi. Ngelixa kulula ukuthi kuxhomekeke kwi-niche / kwintengiso okhoyo kuyo kwaye uyishiye kuloo nto, kukho izimvo ezithile ezisisiseko kodwa ezibaluleke kakhulu ezisebenzisa uninzi lweendlela zosasazo lwentlalo:
Cwangcisa kwaye upapashe owona mxholo ubalulekileyo "NGOKU": Abantu bahlala beqokelela iqela leekhonkco kwaye bazicwangcise ngokusebenzisa iiwebhusayithi zolawulo lweendaba ezinjeHootsuite okanye iBuffer. Ngelixa oku kulungile, qiniseka ukuba umxholo owabelana ngawo awukho nje ngokufanelekileyo kodwa ukwangoku.
Benze kamnandi: Kuyadika, izithuba zomgca omnye kunye nekhonkco elifutshane azizukutsala umdla wabalandeli bakho. Kwiindawo ezinjenge-Facebook kunye neGoogle +, yongeza imifanekiso efanelekileyo kwizithuba zakho. Oku kuzenza zibalasele kwaye zithathe ingqalelo yabantu. Imigaqo esisiseko ye Umdla-Womnqweno-woNomdla sebenzisa kwinto oyiposayo kwimidiya yoluntu. Kwaye ungalibali eyokugqibela: Intshukumo! Soloko usebenzisa ukubizela-isenzo.
Bhala izihloko kunye neenkcazo ezizodwa, ezicacileyo, ezilula, kodwa ezinamandla. Ijelo ngalinye loluntu linabantu abahlukeneyo okanye isitayile sokuzibandakanya. KuFacebook, abantu abazibandakanyi namagqabantshintshi (endaweni yoko, "ukuthanda" kumalunga nokuhamba kwabo, uninzi lwezithuba). Kwi-Twitter, ukubandakanyeka kunokuba nzulu kancinci, ngeempendulo zempendulo kunye neempendulo. Ndilubonile uluntu lwaseGoogle + luzibandakanya kakhulu kunenye indawo. Kodwa kuxhomekeke kwindlela oyifomatha ngayo into oyithumelayo kuzo zonke ezi ndlela zentlalo.
Qonda ukuba amajelo asekuhlaleni ayisiyo kuphela yokuthumela amakhonkco: Ayisiyo Digg, emva kwayo yonke loo nto. Awukho apho ukuthumela amakhonkco kwaye uqhubeke. Inzame esebenzayo yemidiya yoluntu imalunga ukudala uthethathethwano. Ukuba ungabandakanya abasebenzisi bakho- bafumane ukuba babelane, baphinde baphendule, baphendule, bagqabaze okanye baqale ingxoxo Oko kungena kwintsholongwane-ungatsho ukuba iinzame zakho zemidiya yoluntu zihlawule.
Imidiya yokuncokola kukongezwa kwakho / kwiShishini lakho / kwiWebhusayithi yakho
Imidiya yokuncokola ayisiyiyo-kwaye ayinakho-ukuba yinto eyodwa eyahlukileyo ngaphandle kweshishini / iwebhusayithi yakho. Ukuba uyakha iwebhusayithi, kwaye uzama ukuyilungiselela ukugcwala kunye nokuguqula, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iinzame zakho zemidiya yoluntu azihambi.
Ngu "imizamo yeendaba zosasazo," andithethi nje ngokwenza iprofayili esebenzayo kwezentlalo enabalandeli abaninzi, abalandeli, kunye nezinto abazithandayo. Eyona nto ndithetha ngayo yile:
Amaxabiso athembekileyo okucofa
uguquko oluvela kumajelo asekuhlaleni
ukufundela kunye nokugcwala
amathuba aphezulu ezabelo, iimpendulo kwimpinda, kunye nentsholongwane
Iimpawu ezinkulu zisebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ngeROI eqhumayo. Umxholo ophawulweyo ngokukhawuleza uba kwinqanaba elilandelayo lentengiso engabonakaliyo- kwaye uqikelele ntoni? It is iyasebenza. Kwaye ngasemva kwayo yonke sisicwangciso esiqinileyo somxholo esenzelwe ngokukodwa amajelo eendaba ezentlalo.
Ngena kwi-bandwagon ngokukhawuleza kangangoko unako kuba ngokuqinisekileyo kuya kuba nzima (enyanisweni, sele kunjalo) ukuseka ilizwi lakho phakathi kwengxolo.
tags: UkuThengiswa kweMpahlaqhinga lomxholoenjini yokukhangela nounSEOImidiya yokuncokolaSocial Media Marketing
Umkhangeli weTwitter: Fumana uLandelayo uLandelayo